ယခုလို အောင်မြင်မှုရရှိလာပြီး နောက်ပိုင်း အတွင်းခံတို့ ဘော်လီတို့ မဝတ်ဖြစ်တော့ကြောင်း ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ မမဆောင်း(ရုပ်သံ) – သုတရသ
ယခုလို အောင်မြင်မှုရရှိလာပြီး နောက်ပိုင်း အတွင်းခံတို့ ဘော်လီတို့ မဝတ်ဖြစ်တော့ကြောင်း ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ မမဆောင်း(ရုပ်သံ)
မမဆောင်း လို့ အားလုံး က ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ကိုတော့ ပရိသတ် တွေ အားလုံး ချစ်ခင် အားပေးကြပါ တယ်နော်..။သရုပ်ဆောင် ကောင်းပြီး ပွင့်လင်း တဲ့ စကားပြော ဟန်ပန်တွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ကြား ရေပန်းစား အောင်မြင်နေတဲ့ လတ်တ လောမှာ ကြော်ငြာတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေ တာလည်း တွေ့ရ မှာပါနော်. . .
မမဆောင်း ကတော့ ကြော်ငြာတွေ တောက်လျှောက် ရိုက် ကူးနေ သလို Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေ နဲ့ မကြာခဏ ရိုက်ကူး ဆော့ကစား ကာ ပရိသတ် တွေကို သဘောကျ အချစ်ပို စေပါတယ်နော်..။ သူမ ရဲ့ အင်တာဗျူး ဗီဒီ ယို လေးကို လည်း ချစ် ပရိသတ်တွေ ကို အမြဲ မျှဝေလေ့ ရှိသလို အခု တစ်ခါမှာ လည်း မမ ဆောင်းတစ် ယောက် အောင်မြင် ပြီးနောက်ပိုင်း ဘော်လီတွေ အတွင်းခံတွေ
မဝတ်တော့ဘူး ဆိုတာ စလိုက် တာပါ … မမဆောင်း … မမဆောင်း ဟော့ပေ့ါ ၃၀၀၀ တန် တွေ ကို ၈၀၀၀ နဲ့ရောင်းမယ်လို့ မှားပြောမိ တယ် ။ တကယ်တော့ ၈၀၀၀ တန်တွေ ကို ၃၀၀၀ နဲ့ ရောင်း မှာပါ။ မမဆောင်းရဲ့ အောင်မြင်ပြီး နောက်ပိုင်း အလှများဆိုပြီး ပုံ ၄၀ ကျော်နဲ့ တင်ထားတာ တွေ့တယ်။ မမဆောင်း က အောင်မြင်ပြီး နောက်ပိုင်း ဘရာစီယာတွေ ဘော်လီတွေအတွင်းခံ တွေ
မဝတ်တော့ဘူး ပြောလိုက်တာစတာပါ၊ အိမ်မှာနေရင်းမဝတ်တာကို ပြောတာပါ ဆိုတဲ့ ပရိသတ်အ ချစ်တော် >>> မမဆောင်း သူမ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ဝေမျှထားပါသေးတယ်..။ မမဆောင်း ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ လည်း သဘောကျ နေကြမှာ ပါနော်.. ။ ကဲ.. ဒီကနေ့ လေးမှာတော့ ချစ် ပရိသတ်တွေ အတွက် မမဆောင်း ရဲ့ ဗီဒီယို လေးကို ဝေမျှ တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါ တယ်နော် …
video crd : sunday journal
မမဆောငျး လို့ အားလုံး က ခဈြစနိုး ချေါကွတဲ့ သရုပျဆောငျ အဆိုတျော ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ကိုတော့ ပရိသတျ တှေ အားလုံး ခဈြခငျ အားပေးကွပါ တယျနျော..။သရုပျဆောငျ ကောငျးပွီး ပှငျ့လငျး တဲ့ စကားပွော ဟနျပနျတှေ ကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ကွား ရပေနျးစား အောငျမွငျနတေဲ့ လတျတ လောမှာ ကွျောငွာတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးနေ တာလညျး တှရေ့ မှာပါနျော. . . မမဆောငျး ကတော့ ကွျောငွာတှေ တောကျလြှောကျ ရိုကျ ကူးနေ
သလို Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတှေ နဲ့ မကွာခဏ ရိုကျကူး ဆော့ကစား ကာ ပရိသတျ တှကေို သဘောကြ အခဈြပို စပေါတယျနျော..။ သူမ ရဲ့ အငျတာဗြူး ဗီဒီ ယို လေးကို လညျး ခဈြ ပရိသတျတှေ ကို အမွဲ မြှဝလေေ့ ရှိသလို အခု တဈခါမှာ လညျး မမ ဆောငျးတဈ ယောကျ အောငျမွငျ ပွီးနောကျပိုငျး ဘျောလီတှေ အတှငျးခံတှေ မဝတျတော့ဘူး ဆိုတာ စလိုကျ တာပါ … မမဆောငျး … မမဆောငျး ဟော့ပေ့ါ ၃၀၀၀ တနျ တှေ ကို ၈၀၀၀
နဲ့ရောငျးမယျလို့ မှားပွောမိ တယျ ။ တကယျတော့ ၈၀၀၀ တနျတှေ ကို ၃၀၀၀ နဲ့ ရောငျး မှာပါ။ မမဆောငျးရဲ့ အောငျမွငျပွီး နောကျပိုငျး အလှမြားဆိုပွီး ပုံ ၄၀ ကြျောနဲ့ တငျထားတာ တှတေ့ယျ။ မမဆောငျး က အောငျမွငျပွီး နောကျပိုငျး ဘရာစီယာတှေ ဘျောလီတှအေတှငျးခံ တှေ မဝတျတော့ဘူး ပွောလိုကျတာစတာပါ၊ အိမျမှာနရေငျးမဝတျတာကို ပွောတာပါ ဆိုတဲ့ ပရိသတျအ ခဈြတျော >>> မမဆောငျး သူမ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ဝမြှေထားပါသေးတယျ..။
မမဆောငျး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကိုတော့ ပရိသတျတှေ လညျး သဘောကြ နကွေမှာ ပါနျော.. ။ ကဲ.. ဒီကနေ့ လေးမှာတော့ ခဈြ ပရိသတျတှေ အတှကျ မမဆောငျး ရဲ့ ဗီဒီယို လေးကို ဝမြှေ တငျဆကျပေး လိုကျပါ တယျနျော …
ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တကယ်အသဲယားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေမဘုံရဲ့
ဆယ်ကျော်သက် တစ်ယောက် လို့ ကြွှစေရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံရိပ်များ